Chrysalis Workshops Somali · In the Heart of the Beast Puppet and Mask Theatre
Chrysalis MayDay Workshops Somali
Ku soo biir HOBT aqoon-is-weydaarsiga farshaxanka!
Fiidiyowyada turjumaada Af-soomaaliga iyo Hmong waxaa laga heli doonaa HOBT Vimeo aqoon isweydaarsiga kadib.
Waraaqda abuurka gabbaldayaha & Stamp samaynta Graci Horne
Abriil 18-keeda 10-kii aroornimo
Abriil 21 saacadu markay tahay 6 glb
"Ma ogtahay in gabbaldayaha gabbalku uu yahay ubax la yaab leh wahcazizi wuxu ogyahay sidoo kale gabbaldayaha inu yahay ubaxa bogsashada oo loo isticmaalo labadaba dawo ahaan ama cunto ahaan
Marabtaa inaad waarto? Ma dooneysaa inaad barato sida loo sameeyo warqadda abuurkaaga? Kaalay wax barta si xiiso leh si loo yareeyo, dib loo isticmaalo, iyo dib-u-dhiska qaab Native Creative ah. Farshaxanka Dakota Graci Horne ayaa hogaamin doonta qaybta sameynta waraaqaha abuurka oo ay ku xigto qaybta daabacaadda waara. Wadnahaaga ku xidho shaabadooyin la soo saaray oo ah naqshadda gabbaldaha Dakota oo ubax ka dhigay farshaxan.
Sahayda loogu talagalay abuurka warqadda: Shukumaanno, Warqad shumac, Muraayadaha daaqada, Baaldiyo, Abuurka, gabbaldayaha ama miraha ubax kasta, isku qase, Biyo
Sahayda samaynta shaabadaynta: Kaarboor, Sanduuqa Qalleyda, Cajiinka xabagta, Waraaq, Qalin geed, Maqas, Xaashida xumbo, Rinji, Xaashiyaha Stamb, Calaamadeeye
Ku saabsan farshaxanka
Hapistinna [haweenay magac loo bixiyay; Dakota oo loogu talagalay gabadha saddexaad ee dhashay] Graci Horne, waxay ahayd
ku dhalatay kuna soo barbaartay Mnisota [Minnesota]. Xariggeeda ayaa ah dadka Sisseton Wahpeton Dakota iyo Hunkpapa Lakota iyo Dakota. Iyadu waa farshaxan-badan oo edbinta ah, ku takhasustay rinjiyeynta, sameynta daabacaadda, sameynta puppet, sawir qaadista, filimaanta, iyo gabayada.
Horne waxay shahaadada ku qaadataa Daraasadaha Madxafka oo ka socota Machadka Fanka Hindida Mareykanka ee Santa Fe, NM. Shaqadeeda waxaa lagu qeexaa muuqaalka muuqaalka muuqaalka dhirta iyo midabada biyaha waxaana badiyaa lagu xidhaa qaababka dhaqanka Dakota iyo mawduucyada bulshada. Horne waa Curad madax-bannaan waxayna si buuxda u shaqeysaa iyada oo ah barayaasha cilmiga farshaxanada bulshada oo ay ku bartaan aqoon-isweydaarsiyo 5-100 sano jir ah.
Chrysalis MayDay Cranky oo leh Mike Hoyt
Abriil 28-keeda, 6-da fiidnimo
Ku soo biir farshaxanka Mike Hoyt si aad u abuurto shaqo wada shaqeyn intarnetka ah oo sawir leh, oo ka tarjumeysa sheekooyinka shaqaalaha daruuriga ah, abuurka, abuurka, soo bixitaanka, abuurka mustaqbalka, iyo balanbaalisyada.
Muuqaalka Mike waxaa loo isticmaali doonaa sidii gadaal gadaashiisa si aad ula falgashid! Waxaa lagugu casuumi doonaa inaad ku darto waxyaabaha aad adigu sameysay adiga oo gujinaya boombalo yar yar oo warqad ah oo laga sameeyay guriga, sawirrada, fiidyowyada fiidiyowga, ama dhawaaqyada.
Ku saabsan farshaxannimada
Mike Hoyt wuxuu degan yahay Bartamaha Xaafadda South Minneapolis. Waa farshaxan madax banaan iyo maamule farshaxan. Ficilkiisa hal-abuurka leh waxaa ka mid ah sawir, sawir, sawir-gacmeedyo sawir, teknolojiyadda shabakadda, ka-qeybgalka dadweynaha, iyo mas'uulka dhulka ee bulshada. Wuxuu rumeysan yahay in farshaxanimada iyo hal-abuurka ay u adeegi karaan sidii laf dhabarta muhiimka u ah isbedelka bulshada iyo siyaasadeed ee; ka-qayb-gelinta dadka wada-hadalka, is-iftiiminta sheekooyinka qarsoon, dhisidda aag-is-weydaarsi, iyo hay'ad horusocod iyo sinnaan.
Rajo laga qabo Wareegyada ... oo leh Ifrah Mansour
Annagoo xushmeyneyna mawduuca Chrysalis, waxaan dooneynaa inaan sahaminno waxa aan la arkeyn, kuwa aan qarsoon, iyo isbedelada aan qornayn ee nafteena hadda. Waxaan u adeegsan doonnaa saddexdaas weedhood si aan u soo qabsanno isbeddeladeenna. Waxaan baran doonaa sida loo sameeyo Wareegyo loo adeegsado xaashida musqusha ama duub waraaqaha xaashida musqusha, iyo sidoo kale duub, maro iyo calaamadaha midabaynta.
Waxaan nahay ...
Waxaan noqon doonaa ...
Ifrah Mansour waa soomaali, qaxooti, muslim, farshaxan fara badan, iyo aqoonyahan dagan Minnesota. Farshaxankeeda wuxuu indha indheeyaa dhawacyada indhaha carruurta si uu u muujiyo adkaysiyada madow, muslimka, iyo qaxootiga. Waxay isku dhexdartaa gabayada, boombalo, filimada, iyo rakibaadda. Waxaa lagu soo qaatay BBC, Vice, Okayafrica, Star Tribune, iyo Bogagga Magaalada. Si aad ah ayay u qirtay, "Sida loogu Adkeysto Dagaal Sokeeye" ayaa lagu hayaa Tiyaatarka Guthrie waxayna booqan doontaa deyrtan magaalooyinka Saint Paul, Saint Cloud, Rochester, iyo Willmar. Bandhigeedii ugu horreeyay ee madxaf qaran; "Ma Taaban karaa" qayb ka mid ah "Waxaan ahay Soomaali" Waxaa lagu sameeyay Farshaxanka Waxbarashada ee Minneapolis. Gabaygeeda aragtida ah, “Waxaan ahay Qaxooti” waa qayb kamid ah xafladaha Filimka Onleyn-ka ee PBS's. www.facebook.com/ifrahmansourart